ပြောင်းလည်းလာနေသော Cryptocurrency အပိုင်း - ၃ ( Henry Aung ) - PALnet
ပြောင်းလည်းလာနေသော Cryptocurrency အပိုင်း - ၃ ( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်၏ မပြီးပြတ်သေးသော Cryptocurrency အကြောင်း ဆက်ကြပါအုံးစို့။ ယခင်ဆောင်းပါးတွင် Bitfinex ၏ USDT ကြောင့် ပြသနာတက်သည့် အကြောင်းအား ဖေါ်ပြပေးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ပြသနာတက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ USDT သည် ဘဏ်တွင် အပေါင်ထား၍ ထုတ်လုပ်ထားသော Cryptocurrency ဖြစ်သည့် အလျောက် Cryptocurrency ကိုင်ထားသူတို့သည် မိမိတို့ BTC / ETH နှင့် အခြားသော Coin များမှ ငွေ ဖေါ်လိုလျင် ဈေးကွက် အတက်အကျကြောင့် အတော်ပင် ဒုက္ခရောက်ကြရပါသည်။
USDT ပေါ်လာသော အခါ မိမိတို့ Cryptocurrency အား အမြဲတမ်း USD 1$ နှင့် ဈေးညှိထားသော USDT ဖြင့် ဝယ်ရောင်းလုပ်ကြကာ ငွေထုတ်ယူကြပါသည်။ ဤတွင် ပြသနာတက်သည်မှာ Cryptocurrency ဈေးကွက် တွင် USDT များ ဝယ်လိုအား များလာသလောက် ဈေးကွက် လိုက်တက်၍ မရပါ ။
အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် USDT သည် အမြဲတမ်း USD1$ သာ ဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Cryptocurrency တွင် ထုတ်လုပ်ထားသော USDT နှင့် ပြင်ပဘဏ်တွင် အပေါင် ထားသော USDT တို့ ကိုက်ညီမှုရှိပါသလော ဟူ၍ ပြသနာတက်လာပါသည်။
ဤပြသနာများ ကြောင့် KYC ဟူသော အရာပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော် Cryptocurrency ဖြင့် လိမ်လည်မှု / ဂျင်းထည့်မှုတို့ ကြုံရတိုင်း ဥပဒေ ကြောင်းအရဖြေရှင်း လျင် အင်မတန် ရှုပ်ထွေးလှသောကြောင့် Cryptocurrency Exchange site တို့အား KYC ဖြင့် ထိန်းချုပ် လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုးဝါးဆုံး ခံရသည်မှာ USA ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၉ ဝန်းကျင်တွင် ထွက်လာသော ICO မှန်သမျှ အမေရိကန် နိုင်ငံသားများအား ဝယ်ယူခွင့် မပြုခဲ့ကြသည်အထိ ဖြစ်ပါသည်။ ICO ခေတ်ကောင်းကို မှီလိုက်သူတို့ သိကြပါလိမ့်မည်။ ယခင်က Cryptocurrency Exchange တွင် Poloniex / Bittrex တို့သည် အလွန်ရေပန်းစားခဲ့ပါသည်။
အာရှဈေးကွက်တွင် လည်း Exchange Site တခု အတော်ပင်ရေပန်းစားခဲ့ပါသည်။ ထို Exchange Site မှာ ItBit ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ ဘဏ်အ ကောင့်နှင့် တွဲဖွင့်ထား၍ ငွေဝင် ငွေထွက် မည်သည့် ပြသနာမှ မရှိခဲ့ပါ။
ဆိုရလျင် Bitfinex မှ စခဲ့သော USDT ပြသနာ / တရုတ်တို့၏ Bitcoin Scam များ / Bitcoin Crazy ဖြစ်သော ကိုရီးယားတို့၏ Cryptocurrency ပြသနာ များက ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ တွင် cryptocurrency ဈေးနှုန်းများအား အဆုံးထိသို့ ထိုးချလိုက်ကြပါတော့သည်။
ထို အချိန် က Steemit တွင် ရှိနေကြသူများတို့ သတိရကြပါလိမ့်မည်။ နေ့စဉ်ရက်ဆက် Cryptocurrency ဈေးကွက်တွင် အစိမ်းရောင် မတွေ့ရပဲ အနီ ရောင်ချည်းသာ တွေရ၍ ကျွန်တော့ အနေဖြင့် Cryptocurrency သွေးစွန်းသော နေ့ရက်များဟူ သော ဆောင်းပါး ရေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သိလိုသူတို့ ရှာဖတ်ကြပါကုန်။
ဤသို့ သော ပြသနာ များကြောင့် Poloniex / Bitfinex / Bittrex အစရှိသော Exchange Site ကြီးများက KYC ဟူသော အရာအား စတင် အကောင် အထည် ဖေါ်လာခဲ့ကြပါသည်။ ဤသို့ ကောင်အထည် ဖေါ်လာပြီး နောက်ပိုင်တွင် ထို Exchange Site များ အတော်ပင် ပြသနာတက်ခဲ့ကြပါသည်။
Email Verify / Phone Verify. / သာမက နောက်ဆုံး မိမိတို့၏ မှတ်ပုံ တင် Verify ဖြစ်ရန် တောင်းဆိုလာသော အခါ Cryptocurrency ကိုင်ထားသူတို့ အဖြေရှာရန် ဖြစ်လာပါတော့သည်။
ဤသို့ ပြသနာများ တက်နေစဉ် ငါးပွက်ရာ ငါးစာချသော Binance Exchange Site က Cryptocurrency မှ ငွေကြေးထုတ်ယူရန် KYC မလို ဟု ကြေညာ၍ ဈေးကွက် အတွင်း ဝင်လာသော အခါ Cryptocurrency လောကတွင် ဂယက်ရိုက်သွားပါတော့သည်။
26/08/2021 - Thursday - 18;52 Pm
hive-122133 myanmar proofofbrain aeneas neoxian loe creativecoin archon palnet sharing
အော် ဂလိုကို Binance ဆိုတဲ့ သကောင့်သားက
Binance ကလည်း သူ့အကြောင်းနဲ့သူရှိသကိုးလို့။ !PIZZA
Did you know Pizzabot speaks Spanish if you use the command ESPIZZA? (5/20)
ခုတော့ Binance လည်း တရစ်ရစ်ကျစ်လာတော့မယ် ထင်ရဲ့။
Bittrex လောက်တော့ မကျပ်ဘူး ထင်တာပဲ။ !PIZZA
အော် အဲသလို ရာဇဝင်လေးနဲ့ Binanca exchange ပေါ်ထွက်လာတာပေါ့။ဗဟုသုတရပါတယ်အစ်ကို။ !PIZZA
အမှန်တော့ Binance က တကယ်ကို သုံးလို့ကောင်းတာပါ။ !PIZZA
Binance ကခုတော့ KYC တင်ခိုင်းနေပြီ။ အဲ့တာဆို သူတို့က ကိုယ်အကောင့်
တွေကို ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့။ ခုတော့ ကြေငြာထားတာနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်တော့မယ် ဆိုတော့ လူတွေတော့ စိတ်ပျက်ကြမှာ အမှန်ပဲ။
ကိုယ့် အကောင့် အမှန်အကန် ဖြစ်ကြောင်း ဘယ်သူဘယ်ဝါ ဖြစ်ကြောင်း သိရုံနဲ့ တော့ပြသနာမရှိပါဘူး။ Exchange တွေကြောက်တာက အကောင့် တခုတည်း ဒေါ်လာ သန်းချီ ဝင်ထွက်လာရင် အဲဒီပိုက်ဆံတွေက ဘယ်က ရတာလဲ ဆိုတာသိဖို့လိုလာပြီ။ !PIZZA
Binance က လက်ရှိတော့ ကျွန်တော်တို့အတွက်
အမှန်က KYC ဆိုတာ မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်နေသူတွေအတွက် ပြသနာတော့မရှိပါဘူး။ !PIZZA